China Dibenzoylmethane Nlụpụta na Factory | Shuiyuan Teknụzụ Ike Ọhụrụ
Chemicals Nhazi Ọrịa
Njirimara Chemical Dibenzoylmethane
75-79 Celsius C (gbaa.)
219-221 ° C18 mm Hg (agbanye.)
219-221 Celsius C / 18mm
Chekwaa na RT.
8.95 ± 0.10 (Eburu amụma)
Ìhè odo ka odo
Ọ bụ soluble na ether, chloroform, na mmiri sodium hydroxide. Mmiri anaghị agbaze n'ime mmiri.
Anụ. Ekwekọ na ike oxidizing mmadụ.
Ihe ngosi Mberede
Dibenzoylmethane ojiji na njikọ
Njirimara Chemical: ntụ ntụ na-acha ọcha
Na-eji: dibenzoylmethane dị ka ihe ọhụrụ PVC okpomọkụ stabilizer, nnukwu transmittance, na-abụghị egbu egbu na keenweghiuto; nwere ike dịkwuo mma n'oge PVC agba, nghọta, ogologo oge kwụsie ike, na nhazi n'oge ọdịda na "zinc ọkụ" na na; ọtụtụ-eji ọgwụ, nri nkwakọ na ndị ọzọ na-abụghị na-egbu egbu uzo PVC ngwaahịa. Dibenzoylmethane nke dị n'elu nwere ike ịmịcha ọkụ 290nm ultraviolet, ebe ọkụ na-enwe mmetụta na-eme ka ngwaahịa PVC nwee ike inye arụmọrụ arụmọrụ ogologo oge.
Nkọwa: ChEBI: beta-diketone nke bụ acetylacetone (acac) nke ndị otu methyl nọchiri anya site na phenyl dị iche iche. Ọ bụ obere ihe mejupụtara mgbọrọgwụ nke licorice (Glycyrrhiza glabra) ma gosipụta antimutagenic na antica cer effects.
Profaịlụ nchekwa: Na-egbu egbu nke ọma site na ingestion. Mgbe ewe iwe na decomposition ọ emits acrid anwụrụ ọkụ na mgbakasị vapors
Metzọ ọcha: Dibenzoylmethane (1,3-diphenyl-1,3-propanedione) [120-46-7] M 224.3, m 8 0o. Choo dibenzoylmethane site na ether ma ọ bụ MeOH. [Beilstein 7 IV 2512.]
New-adịghị egbu egbu inyeaka okpomọkụ stabilizer nke calcium, zinc na obere ụwa ——Dibenzoylmethane (DIBENZOYL METHANE) The isi mma index: Ọdịdị: White, ìhè odo crystalline ntụ ntụ Afọ: ≥99% Agbaze ebe: 76 ~ 80 ℃ Ihicha ọnwụ: ≤ 0.5% Ash ọdịnaya: ≤0.1% Mbukota: 25kg, 50kg Stearoyl benzoyl methane ngwaahịa: PVC ọhụrụ na-abụghị egbu egbu inyeaka okpomọkụ stabilizer, nwere ike iji na calcium / zinc, barium / zinc na obere ụwa ọcha, nwalere site National Research Center. ma gosipụta ogo ngwaahịa ndị ahụ n'ụzọ zuru oke tozuru ogo nke ngwaahịa ndị si mba ọzọ yiri ya. Companylọ ọrụ anyị bụ otu n'ime ndị nrụpụta kasịnụ nke Dibenzoylmethane na ngwaahịa anyị na-erekarị European, American, Taiwan of China, Japan, South Korea, Russia, India,
Mexico, wdg na anyị nwere ndị ahịa na mba 40. Ngwaahịa a na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha odo odo na-acha odo odo, na-adị mfe soluble na ether, trichloromethane, o-Xylene, toluene na sodium hydroxide mmiri, dị ntakịrị soluble na ethanol, dị ntakịrị soluble na mmiri. Dị ka ụdị ọhụrụ nke PVC inyeaka okpomọkụ stabilizer, ya transmittance dị elu, na-abụghị na-egbu egbu na keenweghiuto; enwere ike iji ya mee ihe na calcium / zinc siri ike ma ọ bụ mmiri mmiri, barium / zinc na ndị na-ekpo ọkụ ọkụ ndị ọzọ, nwere ike imeziwanye agba agba mbụ nke PVC, nghọta, na nkwụsi ike ogologo oge, yana ọdịda na 'zinc fever' na nhazi; njirimara ya ọ bụ ezigbo mmetụta synergistic na 'zinc ncha', mgbakwunye nke ngwaahịa a nwere ike igbochi 'zinc ọkụ', dabara adaba iji mejuputa nke siri ike, nke na-adịghị egbu egbu, nke na-enweghị ntụpọ, na-akwalite nwelite nke Calcium / Zinc compound stabilizer, ọ ọtụtụ-eji ọgwụ, nri nkwakọ na ndị ọzọ na-abụghị na-egbu egbu uzo PVC ngwaahịa (dị ka ịkwanyere karama, Ibé akwụkwọ, a uzo film wdg). Dibenzoylmethane nwere ike ịmịkọrọ ihe karịrị 290nm UV, n'otu oge ahụ inwe ọrụ nke nrụgide ọkụ, nwere ike inye nkwụsi ike ogologo oge na ngwaahịa PVC.
Nke gara aga: Ntughari
Osote: 1,3-Diphenylpropane-1,3-dione 99%